Ukwanda komkhuhlane ekukhulelweni
Ngexesha lokukhulelwa, umfazi usoloko unesifo somkhuhlane. Kule nkalo, abafazi bahlala benemibuzo eyahlukeneyo, njengale: yintoni ixabiso lokushisa eliqhelekileyo; Yintoni enokuyenza xa iqondo lokushisa liphakama, njl. Ukuphendula le mibuzo neminye kuyimfuneko ukuqonda ukuba kutheni ukushisa komzimba kuphakama.
Iimbangela zefiva ekukhulelwe
Esona sizathu esivakalayo solu hlobo ngexesha lokukhulelwa yiyo imeko yokukhulelwa. Ngeli thuba kukho utshintsho oluphawulekayo kwinkqubo yehomoni yowesifazane: kwinani elikhulu liqala ukuhlakulela i-hormone progesterone, ngokweengcali, oku kungabangela ukunyuka kwamaqondo obushushu.
Ukongezelela, ngexesha lokukhulelwa, ukukhusela kwamabhinqa kuncitshiswe kancinci, okuyinto engokwemvelo. Oku kungenxa yokuba kungenjalo kukho umngcipheko wokugatya umzimba womfazi wesisu. Kwaye, njengokuba uyazi, ukuhla kwezinto ezikhuselekileyo emzimbeni kudla ngokuhamba kunye nokunyuka kweqondo lokushisa komzimba. Ngoko ke, into efana neyo "bushushu" ngexesha lokukhulelwa yinto yemvelo kwaye iyinto eqhelekileyo. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ukushisa komzimba kungasuka kuqala. Kuvumelekile ukuphakamisa izinga lokushisa lomzimba ngexesha lokukhulelwa, zombini kwi-trimester yokuqala nakwesibini. Nangona kunjalo, ukunyuka kwamaqondo omzimba kwi-trimester yesithathu, mhlawumbi, kubonisa ukuba kukho nasiphi na isifo.
Ukuba sithetha ngobushushu obuphakamileyo obuvumelekile, ngoko umgangatho wenyuka i-0.5-1 degrees. Ngaloo ndlela, ukushisa komzimba ngexesha lokukhulelwa, ukuba ukongezwa kubangelwa ukukhulelwa ngokwayo, kufuneka kube malunga nama-degrees amathathu. Akuyimfuneko ukuthatha nawaphi na amanyathelo okanye amanyathelo kulo mzekelo, kuba imeko enjalo ayingozi kubaphi na umfazi okanye umntwana wakhe. Nangona kunjalo, kucetyiswa ukuba uxelele ugqirha oya kwi-presence of fever.
Kuhluke ukuba ukushisa komzimba kuphakame ngenxa yobunjani bezinye izifo. Kule meko, ukushisa komzimba kuphakama ngaphezu kwama-degrees angamashumi amathathu anesixhenxe. Ukwanda okunje kubangela ingozi ethile kwintsana, kwaye ngoko ke kufuneka ukuba kwenziwe amanyathelo afanelekileyo.
Indlela yokujongana nomkhuhlane ngexesha lokukhulelwa
Ngokuqhelekileyo, oku kunyuka kubangelwa izifo eziphefumulayo. Ukunyangwa kwezi zifo ngeli xesha kunzima, kuba umfazi akakwazi ukuthatha uninzi lwamachiza anceda kwezi zifo. Oku kungenxa yokuba le mayeza angabangela ingozi enkulu kumntwana, ngoko ke ukhetho lwonyango lufanele lwenziwe kwimeko nganye, ngokuqwalasela imeko yowesifazane, ubunzima besifo, ukuphumelela kwamachiza,
Ukuba ukuphakama komzimba kubangelwa zizifo eziphefumulayo, kwaye inkambo yesifo ayinzima, indlela eyona nto yokwelapha ithatha imishanguzo ngokwemiqathango yemithi yendabuko. Umzekelo, ukuba uyisula umzimba ngamanzi apholileyo, ngoko unokunciphisa izinga lokushisa lomzimba. Ukucima utywala akuyithandeki, kuba utywala uphumelela ngesikhumba ukuya emzimbeni. Ukongezelela, itiye le-sweatshop kunye ne-linden okanye i-raspberries yindlela efanelekileyo yokulwa nezifo. Nangona kunokwenzeka ukusebenzisa ezinye izidakamizwa ezifanayo, ezisebenza ngokukhawuleza ekunciphiseni ubushushu kwaye azidingi ukusetyenziswa kwamachiza.
Ukuba ukunyuka kubangelwa ukugula okukhulu, umzekelo, i-pyelonephritis okanye i-pneumonia, ngoko akunakwenzeka ukulawula ngaphandle kokusetyenziswa kweyeza. Izindlela ezidumileyo kuphela apha akunakwenzeka ukunceda. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ingozi kule meko ayikho kwiqondo eliphezulu lokushisa komzimba, kodwa kwintsholongwane yangoku. Musa ukulibala ukuba amayeza ahlukeneyo anamazinga ahlukeneyo engozi kwintsana ezayo. Ngoko ke, ukuba kukho isidingo sokuthabatha amayeza, kubalulekile ukuba uthathe ngokungathí sina ukukhethwa kwezidakamizwa, ukuhambelana nokusebenza kakuhle kunye nomngcipheko. Ngokuqinisekileyo, ngaphambi kokuthatha nayiphina imithi kuyimfuneko ukubonisana nodokotela ophawulayo.
Iintlobo kunye neengxaki zokukhulelwa ekukhuleni
Ukunyamekelwa kweenwele ngexesha lokukhulelwa
Ungakusindisa njani amabele ngexesha lokukhulelwa?
Iipilisi zeHormonal ezintathu-merci
Indlela yokutya kakuhle kwiiveki zokuqala zokukhulelwa?
Omnye kwiqela lamadoda
Ukubuyiselwa emva kokuphulwa kwezingane
Ukupheka: izibhengezo ebusika, amasaladi
Indlela yokukhusela intombazana evela kwinkampani embi
Indlela yokwenza iileyile ukuze zide?
Isaladi kwiebherethi ezibilisiwe
Ubomi bomntu siqu kaFilipu Kirkorov: ziphi iimfihlo ezifihliweyo ngumculo wokumkani wasepop
Sihombisa iimoto zomtshato - isitayela kunye nesimo sokuqala
Iintlobo ngemfashini - kunye nento enxibe ngayo umbala wesikhumba?
I-Fitball yabasetyhini abakhulelweyo
Iingcebiso zengqondo: indlela yokuphepha ukuxabana phakathi kwabazali nabantwana
I-Biography ye-actor Andrei Gaidulian
Ziziphi ukutya zokunyusa amandla?
UGarik Kharlamov wayengalindelekanga ekutyelele iKadyrov, ifoto
Igama lokuqala lomntwana
Ukuhlaziywa kwefilimu Kung Fu Panda